Dowladda Soomaaliya oo 45 maalmood u qabatay Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
War-saxaafadeed: Shirka aan caadiga aheyn ee ay golaha wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya xalay ku yeesheen magaalada Muqdisho, ayaa waxaa looga hadlay howlgalka Badweynta Hindiya ee ay ciidammada Xoogga dalka Soomaaliyeed ka wadaan gobollada dalka qaar ka mid ah, iyadoo shirka golaha laga soo saaray qodobbo lagu xoojinayo howlgallada dalka ka socda.
Shirka Waxaa guddoominayey Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed, shirka ayaa gaaray ilaa xalay fiidkii.
Shirka golaha wasiirrada, kaddib ayaa waxaa shir jaraa’id oo looga hadlayey go’aananda Xukuumadda Qabtay Wasiirka Amniga Qaranka Soomaaliya, Khaliif Axmed Ereg, waxa uu ka hadlay dhammaan qodobboada ay soo saartay Xukuumadda ee la xiriirra howlgallada Badweynta Hindiya ee dalka ka socda, waxaana qodobbada ay kala yihiin:-
1. Xukuumaddu waxay sii wadaysaa ayna xoojinaysaa howlgalka lagu soo afjarayo Kooxaha Argagixisada.
2. Waxaa Xukuumaddu cafis u fidinaysaa kooxaha la marin habaabiyay cafis kaas oo ay ka faa’iidaysan karaan muddo 45 cisho ah, cidii ka faa’iidaysan weyda waxaa loo aqoonsanayaa dambiile sharciga ayaana la horgaynayaa, xubnaha ka faa’iidaysta cafis kaas Xukuumaddu waxayna u abuuri doontaa nolol fiican oo dib ugu dhistaan mustaqbalkooda
3. Xukuumaddu waxay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaysaa in ay barbar istaagaan ciidamadda geesiyaasha ah ee la dagaalamaya cadowga.
4. Xukuumaddu waxay ugu baaqaysaa Culima’udiinka Soomaaliyeed in ay doorkooda ka qaataan marxaladdan muhiimka ah, iyagoo iftiiminaya fahamka guracan iyo been ka sheega diinta Islaamka.
Dhinaca kale Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya, Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo isagana la hadlay wariyeyaasha ayaa ka hadlay duqeymihii ka dhacay Degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose, waxa uu yiri “Ujeedada howlgalkaasi duqeynta ah waxa uu ahaa in la qaarajiyo rag horjoogayaal ah oo Al-Shabaab ka tirsan, ma ahan muhiim inaan hadda halkan ka sheego magacyada raggaasi, laakin baaritaan ayaan wadnaa, natiijada saxda ah shacabka Soomaaliyeedna waan la wadaagi doonaa”.
Sidoo kale Afhayeenka Xukuumadda ayaa yiri “280, tan oo raashiin gar-gaar ah ayeey ciidammada AMISOM gaarsiin doonaan magaalada Buula-burde ee gobolka Hiiraan, waxaana deeqdaasi ku yaboohdey dowladda Jamhuuriyadda Jabuuti, waxa ayna qeyb ka yihiin gurmadka loogu talagalay in lagu caawiyo meelaha ay abaaraha ka jiraan”.
kulanka dhammaadkiisa, Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa duco uga akhriyey dadka iyo dalka in uu gaarsiiyo horumar iyo nabad, iyadoo xubnaha golaha wasiirrada ay halkaasi ka qaadeen heesta Astaanta Qaranka Soomaaliyeed ee Soomaaliyeey Toosoo.